Codsiga Christchurch: Shir Looga Hortagayo Argagaxisada Cadaanka Xagjirka ah oo Paris ka Furmey – XOGMAAL.COM
Codsiga Christchurch: Shir Looga Hortagayo Argagaxisada Cadaanka Xagjirka ah oo Paris ka Furmey
Madaxda dowladaha caalamka iyo madaxda shirkadaha Internet-ka waaweyn oo ka arrinsanayo cadaanka xagjirka ah iyo taxa ay ka caban karaan
By Muriidi Baba	 Last updated May 15, 2019
Madaxda wadamo dhowr iyo toban ah iyo hogaanka sare ee shirkadaha Google, Facebook iyo Twitter oo ka qaybgalaya shir Faransiiska uga furmey oo loogu magacdarey, Codsiga Christchurch. Shirkan oo ay codsatey Raysul Wasaaraha New Zealand ayaa lagu doonayaa in lagu xakameeyo nacaybka cadaanka xagjirka ah ay ku fidinayaan baraha bulshada.
Jacidna Andren, Raysul Wasaaraha New Zealand oo madaxweynaha Faransiiska, Emmanual Macrone ka codsatey in uu gogosha dhigo waxa ku weheliyo kulankan madaxada wadamada Ingiriiska, Kanada, Ireland, Cumaan, Norway, Sinigaal, Induniisiya iyo Midowga Yurub oo uu wafti balaaran ka joogo.
Dowlada Mareykanka ayaa diidey in ay shirkan ka qaybgasho amaba taageerto waxa ka soo baxo. Arrintaas ayaa shaaca ka qaadeysa tuhunka weyn ee ay dad badani ka qabaan xukumada Madaxweyne Donald Trump iyo saameynta ay ku leeyihiin cunsuriyiinta Mareykanka ee diidan diimaha aan masiixiga ahayn iyo dadka aan cadaanka ahayn in ay Mareykan ku najaxaan.
Ulajeedada uguweyn ee shirkan laga leeyahay ayaa waxaa ka mid ah in la xakameeyo nacaybka lagu baahinayo baraha bulshada, siiba kan ay ku hayaan cadaanka xagjirka ah oo aysan hay-addaha amniga iyo shirkadaha internet-ku aysan xoogga u saarin sida ay u ilaaliyaan dadka fikradaha xagjirka ah ee kala qabo oo ay Daacish, Al-Qaacida iyo Al Shabaab ka midka yihiin.
Madaxas shirkadda Facebook oo hadley ka hor inta uusan shirku furmin ayaa shaaciyey in ay fariintan aqbaleen, horeyna u bilaabeen in ay dib u eeegis ku sameeyeen siyaasadda lagu dhaqo isticmaalka Facebook. Shirkadu waxa ay si gaar ah isha uguhaysaa barnaamijkaTooska loo daawado.
Christchurch, New Zealand oo ah magaaladi uu Muslimiin badan oo salaadi Jimcaha gudanaya uu ku laayey nin cadaan xagjir ah ayaa loogu magacdarey kulankan. Weerarkan ka dibna waxaa dunida galbeedka ka dhacay weeraro iyo cabsigalin lagu hayo muslimiinta laga tirada badan yahay ee ku dhaqan qurbaha. Sida darteed ayey masaajida magaalooyinka qaar u bilaabeen in ay waardiye hubeysan qortaan, halka magaalooyinka qaarna ay salaadaha jimcaha iyo Taraaqiixda boolis u diraan masaajida.
Gobolka Minnesota oo Kaalinta Sadexaad ka Galey Gobollada ugu Wanaagsan Mareykan